MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2012-10-28
ဖားကန့် အစိုးရ ဗျူဟာကုန်းမှ လူနေရပ်ကွက်များသို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်
နိုဝင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့ တွင် ဖားကန့်အခြေစိုက် ဗမာအစိုးရ ဗျူဟာကုန်းမှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ဗလခ လူနေရပ်ကွက်များသို့ ပရမ်းပတာပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အပြစ်မဲ့အရပ်သား ၃ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ၁ ဦးမှာ အလွန် စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေတွင် ရှိနေပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ပြီးသည့် နောက် ပထမဆုံး အစိုးရတပ်များ၏ လူထုအားရည်ရွယ်၍ ပစ်ခတ်မှုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဖားကန့်ဒေသတွင် အစိုးရတပ်များသည် KIA တပ်များထက် ပြည်သူများ ကိုသာ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်နေခြင်းမှာ ယခုနှင့် ငါးကြိမ်မြောက်ဖြစ် ပါသည်။ ယနေ့ ဗမာအစိုးရဖက်မှ လက်နက်ကြီးများ အလုံး ၂၀ ခန့် ပစ်ခတ်ခဲ့သော်လည်း KIA ဖက်မှ ယခုအချိန်အထိပြန်လည် တိုက် ခိုက်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ပစ်ခတ်မှုများသည် KIA တပ်ဖွဲ့များတပ်စွဲထားရာ မော်မောကုန်း၊ ဆိုင်းဂျာဘွန်၊ လမောင်ကုန်းများနှင့် ၃ မိုင် ၄ မိုင်ခန့် ကွာဝေးသော ဗလခမှော်၊ သဌေးဂျောင်မှော် စသည့် ကချင်များ အနေများသည့် ရပ်ကွက်များသို့ အများဆုံးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဗမာအစိုးရအနေဖြင့် KIA အားတိုက်ခိုက်သည်ဟု ဆိုသော အရာအတွက် မေးခွန်းများမေးစရာဖြစ် လာပါသည်။ ဗလခ ဒေသခံ တစ်ဦးက “ဒါက အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်ခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်၊ စစ်သား စစ်သားချင်း၊ သေနတ် သေနတ်ချင်း တိုက်ခိုက် ကြတာကို ဘာမှမပြောလိုပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အခုက အရပ်သားပြည်သူ တွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်လာတာကိုတော့ ရှုတ်ချပါတယ်။ ဒါက သူပုန်လုပ်ရပ်ပါ။” ဟုသူ၏အမြင်ကိုပြောပြပါသည်။ ယခုအခါ ဖားကန့် ဒေသခံအများစုမှာ ဗမာအစိုးရ၏ လုပ်ရပ်အပေါ် ခံပြင်းလျှက်ရှိပါသည်။ ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုလည်း နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် အသင်းတော်မှ တာဝန် ရှိသူများက အလှူငွေများပေးအပ်ကူညီလျှက်ရှိသည်ဟု ဒဏ်ရာရရှိသူ များ၏ မိသားစုဝင်များ က ပြောပြပါသည်။
at 11/03/2012 11:36:00 AM No comments:
at 11/02/2012 08:35:00 PM No comments:
မြန်မာအစိုးရနဲ့ ကချင် ကေအိုင်အိုလွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကြား ပြီးခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ စစ်ရေးကိစ္စ မဆွေးနွေးခဲ့တာမို့ နောက်တခေါက် ဆွေးနွေး ရေး အဆင်ပြေဖို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်တွေ အနေနဲ့ ကေအိုင်အိုဌာနချုပ်မှာ ကြာသပတေးနေ့က သွားဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာအစိုးရဘက်က တပ်တချို့ ရုပ်ပေး ရေး ညှိနှိုင်းဖို့ရှိတယ်လို့ ကြိုတင် အကြောင်းကြားခဲ့ပေမဲ့ ကေအိုင်အိုဘက် က ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ စစ်ရေးခေါင်းဆောင် မတက်လာခဲ့တဲ့ အပေါ် နောက် တခေါက် ဆွေးနွေးပွဲအတွက် စိုးရိမ်မှုတွေရှိလာချိန်မှာ အခုလို ဆွေးနွေး ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကို ကိုဝင်းမင်းက မေးမြန်း တင်ပြထားပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့က မြန်မာအစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အိုကချင်အဖွဲ့အကြား ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အပစ်အခတ်ရပ်ရေး တရားဝင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာမှာ ကေအိုင်အိုဘက်က ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ တာကြောင့် အခုလို အစိုးရဘက်က သုံးပတ်ခန့် ကြိုအကြောင်းကြားခဲ့တဲ့ တပ်ရုပ်ပေးရေး သူတို့ဘက်က ကမ်းလှမ်းခဲ့တာကို ဆွေးနွေးခွင့်မရခဲ့ ဘူးလို့ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်တွေက ဆိုပါတယ်။
at 11/02/2012 08:13:00 PM No comments:
at 11/02/2012 08:11:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ နယ်မြေ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တပ်မဟာ (၄) ဒေသ မုန်ဂူအခြေစိုက် ဗမာအစိုးရစစ်တပ် ခလရ (၆၈) တွင် အောက်တိုဘာ (၃၁) ရက်၌ ဗမာစစ်သားအချင်းချင်း ပစ်ခတ်မှု ကြောင့် နှစ်ဦးသေဆုံးသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မုန်ဂူ အခြေစိုက် ဗမာအစိုးရစစ်တပ် ခလရ (၆၈) မှ စစ်သားများကို ကင်းလှည့် ရန် ခိုင်းစေရာ စစ်သားတစ်ဦးမှ အမိန့်နာမခံပဲ တပ်စခန်းတွင်သာ အရက် သောက် မူးယစ်ပြီး ကျန်ခဲ့ကြောင်း၊ စစ်သားများ ကင်းလှည့်ရာမှ ပြန် ရောက် ချိန်အထိ မူးယစ်နေသော ကြောင့် တာဝန်ရှိစစ်ဗိုလ်မှ ဆဲဆို ကျိန်းမောင်းရာ စစ်သားမှ တာဝန်ရှိစစ်ဗိုလ်အား သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ် လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ပစ်သတ်ခံရသော ဗမာစစ်ဗိုလ်၏ ကိုယ်ရံတော်ကလည်း ထိုစစ်သားကိုပြန်လည် ပစ်သတ်ခဲ့ကြောင်း၊ သေဆုံး သွားသော ဗမာစစ်ဗိုလ်နှင့် တပ်သားကို မုန်ဂူ လယ်ကွင်းပြင် တွင် နိုင်ဝင်ဘာ (၁) ရက်နေ့၌ သွားရောက်မြုပ်နှံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါ သည်။
at 11/02/2012 07:19:00 PM No comments:
KIO delegates have arrived back at Maija-yang city after 4-hours long meeting with Burmese government’s union level delegates on Oct 30. No comprehensive ceasefire agreement was signed in this meeting. This was the fourth official meeting between Kachin Independence Organization and Burmese government. Three previous official meetings were held at the same venue in Ruili on Nov 2011, Jan 2012, and March 2012.
at 11/01/2012 03:05:00 PM No comments:
at 11/01/2012 03:03:00 PM No comments:
‘နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ တပ်မတော်တစ်ခုပဲ ရှိရမှာပါ။ အဲဒီတပ်မတော်သည် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ဖြစ်ရပါမယ်’ KIO ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် ဦးဂျီးနောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကော်မတီနှင့် KIO ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့တို့၏ ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သော KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် ဦးဂျီးနောင်နှင့် ဆွေးနွေးပွဲအပြီး တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့သည်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မေး - အခုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲအရ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ ဆက် လက်ဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူညီမှု အပြည့်အ၀ရခဲ့ ပြီလို့ ပြောနိုင်ပြီလား။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့။ သဘောတူညီမှု ရပါပြီ။ ဆက်ဆွေးနွေးရမှာပါ။ တိုး တက်မှုရှိပါတယ်။
at 11/01/2012 02:08:00 PM No comments:
ဖားကန့်ဒေသ ဆိုင်းတောင်နှင့်တာမခံကြားတွင် ကားတစ်စီးသေနတ်ဖြင့်အပစ်ခံရပြီး နှစ်ဦးသေဆုံးကာ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရ
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ဒေသ ဆိုင်းတောင်နှင့်တာမခံအကြား နန့်မော် ဘုန်းကြီးကျောင်းအနီးတွင် အောက်တိုဘာလ ၃၁ရက်မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ခန့်က ကေအိုင်အေနှင့် တပ်မတော်အကြားပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဗင်ကားတစ်စီး သေနတ်ဖြင့် အပစ်ခံရပြီး လူနှစ်ဦးသေဆုံးကာ နှစ်ဦး ဒဏ်ရာ ရခဲ့သည်ဟုဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။
အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုသည် မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ ၂ နာရီခွဲအထိ ကြာမြင့်ခဲ့သည် ဟု သိရသည်။ ''စစ်သားတွေက တာမခံ ဘက်ကနေလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကားက ဆိုင်းတောင်ကနေ တာမခံကို သွားတာပါ။ ပထမတော့ ကျွန်တော်တို့ကားကို ရပ်စောင့်နေသေးတယ်။ ပစ်ကြ ခတ်ကြတာ ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ စစ်သားတွေက ကျွန်တော် တို့ကားကို ကာဗာယူပြီး ပစ်ကြတယ်။ ပစ်ကြတာက ကာကွယ်စရာ နေရာမရှိတော့ ကျွန်တော်တို့က ကြောက်လို့ မောင်းပြေးတော့ မောင်း ရင်းနဲ့ လာထိ တာပါ။ စစ်သားတွေကတော့ တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ဘယ်နှစ် ယောက်ကျ တယ်ဆိုတာ မသိရဘူး။
at 11/01/2012 02:01:00 PM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရာတွင် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ၌လည်း အဓိကတာဝန်ရှိဟု UNA ပြော
ရဲမွန် – ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရာ၌ တပ်မတော် အကြီးအကဲ များသည်လည်း အဓိက တာဝန်ရှိသူများ ဖြစ်သည်ဟုဆိုပြီး လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ အဆုံးသတ်ရာတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်သွားရန် လိုကြောင်း ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့ (UNA) က အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
“သမ္မတကြီး ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တပ်မတော် ခေါင်းဆောင် ကြီး များသည် တိုင်းပြည်၏ စစ်မှန်သော ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသူများ ဖြစ်သည့်အတွက် လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ် စစ်ပွဲများ အပါအဝင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို အမြန်ဆုံး ရပ်စဲရန်နှင့် အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမြန်ဆုံး ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်” ဟု အဖွဲ့ဝင် ၅ ဖွဲ့ ပါဝင်သည့် UNA ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတော် သမတ ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အနေနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နေသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အပြည့်အဝ မအောင်မြင်ခြင်း၏ အကြောင်းမှာ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
at 11/01/2012 11:45:00 AM No comments:
နှစ်ဘက် အမြန်ဆုံး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန် KIO နှင့်အစိုးရ သဘောတူ
ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့တို့ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့ရှိ ကျင်းချိန် (Jin Cheng) ဟော် တည်၌ ယနေ့နံနက် ၉ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်အထိ နှစ်ဘက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီးနောက် နိုင်ငံရေးအရ ဆက်လက် ဆွေးနွေးမှုတွေ အမြန်ဆုံး ပြုလုပ်သွားဖို့ သဘောတူညီခဲ့သည်။
နှစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်များ နံနက် ၉ နာရီမှ နေ့လည် ၁၁ ခွဲခန့်အထိ ပထမပိုင်းတစ်ကြိမ်နှင့် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲခန့်မှ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့် အထိ နှစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲပြီးသည့်နောက် ယင်းအခြေအနေ များ အား နှစ်ဘက် ကိုယ်စားလှယ်များက သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက် အခိုင်အမာပဲ ဦးအောင်မင်းအနေနဲ့ သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ နောက်တွေ့တဲ့ အခါ အမြန်ဆုံး တွေ့နိုင်ဖို့ လည်း ကျနော်တို့ကြိုးစားသွားမယ် ” ဟု KIO ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စား လှယ် ဦးဂျီးနောင်က ပြောသည်။
at 11/01/2012 11:13:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဗမာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေစဉ် ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်တပ် တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေဖြစ်သော မြစ်ကြီးနား - ဗန်းမော်လမ်း ဂျာပူတွင် ဗမာစစ်သား များ၏ ထိုးစစ်ဆင်လာမှုကြောင် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ၏ ခမရ (၃၂၁) တပ်ရင်များနှင့် အောက်တိုဘာ (၃၀) ရက်နေ့တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရသည် ယခုကဲ့သို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေစဉ် တွင်ပင် ရှေ့တန်းသို့ စစ်အင်းအားများ အလုံးအရင်း ပို့ဆောင်နေခြင်းသည် အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ကမ္ဘာကို လိမ်ရန်သက်သက်သာဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်သူများမှ မှတ်ချက် ပေးလာကြပါသည်။ ဤစစ်ပွဲတွင် ဗမာအစိုးရစစ်တပ်ဘက်မှ (၅) ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
at 11/01/2012 11:09:00 AM No comments:
“အာဏာရှင်စနစ်ကို အမြစ်ကျွတ်အောင် မချွတ်နိုင်သေးဘဲ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးရေးကို ကြိုးပမ်းနေမှုတွေဟာ ရေပေါ် အရုပ်ရေးသလို အချည်းနှီး ဆောင်ရွက်မှုတွေသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။”
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ် လိုလားတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကနေ စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအထိ တက်လှမ်းလိုတယ်ဆိုရင် စစ်အာဏာရှင်တွေ ကြိုးကိုင်ထားဆဲ မြန်မာစစ်တပ်ကို အရပ်သား အစိုးရစစ်စစ်တရပ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက် အရောက်ပို့နိုင်ရေး ပြည်သူနဲ့ အတူ အရင်ကြိုးပမ်းကြဖို့ လိုပါတယ်။ အလုံးစုံသော အာဏာပါဝါရှိတဲ့ အရပ်သားအစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုနဲ့မှသာ စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
at 10/31/2012 03:33:00 AM No comments:
ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းမှု ဖေါ်ဆောင်ရေး ကော်မီတီ ဒုက္ကဌ ဦးအောင်မင်း၏ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) နှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ထိရောက်မှု မရှိကြောင်း၊ ယနေ့ ကျင်းပသော တရုပ်ပြည် ရွှေလီ ဆွေးနွေး ပွဲကို လေ့လာနေသည့် ကချင် ခေါင်းဆောင် တဦးက ဆိုပါ သည်။
“ ဒီလိုဗျ။ အစိုးရက အပစ်ရပ်ရေး ကိုဘဲ လိုချင်နေတာကို ကချင်က သိတယ်ဗျ။ ကချင်ကတော့ နိုင်ငံရေး အရ ဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာချင်နေ တယ် ဒီတိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးတွေ အတွက်။ အခု အစိုးရက လုပ် ထား တဲ့ ပုံစံမျိုးလို တခြား တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ အပစ်ရပ် ထားပြီးတော့ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ် နေတာကို ကချင်ဖက်က မလိုလားဘူး။ ဒါကြောင့် နှစ်ဖက်စလုံးက ခြေမြင်နေကြတော့ အစိုးရဖက်က ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော် မပါလို့ ဆိုပြီး စစ်ရေး ကိစ္စကို အကြောင်းပြ နေတာပေါ့၊ ဒါကြောင့် အခု ဆွေးနွေးပွဲက မထိရောက် တော့တာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆိုပါသည်။
at 10/31/2012 03:17:00 AM No comments:
at 10/31/2012 03:16:00 AM No comments:
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် KIO အဖွဲ့တို့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီ၌တွေ့ဆုံ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များ မတက်ရောက်ခဲ့၍ စစ်ရေးဆိုင်ရာ ထူးခြားသည့် အဖြေထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူ
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် KIO၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့တို့သည် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့ရှိ ကျင်းချိန် (Jind Cheng) ဟိုတယ်၌ ပထမဆုံး အကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ တွင် နှစ်ဖက်တပ်များ နေရာရွှေ့ထားရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေး မှုများ ပြုလုပ်မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်များ မတက်ရောက်ခဲ့သဖြင့် စစ်ရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက် ပြီး ထူးခြားသော အဖြေထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းအရ ဆက်လက် ဆွေးနွေးကြရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
ရွှေလီ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အထူးစစ်ဆင်ရေးမှူး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး တက် ရောက်ရန် မူလက စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း KIA ဘက်မှ ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော် တက်ရောက်လာခြင်း မရှိသည့် အတွက် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးလည်း တက်ရောက်ခြင်း မပြုခဲ့ရာမှ စစ်ရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်သည့် အဖြေ မထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 10/30/2012 07:03:00 PM No comments:
at 10/30/2012 06:10:00 PM No comments:
at 10/30/2012 06:07:00 PM No comments:
အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် ကချင်ဒုက္ခသည်များ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းနှင့်တွေ့ဆုံ
အမေရိကန်နိူင်ငံ ရှိ Multicultural Refugees of Coalition (MRC) ခေါ် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး မှ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာ သော ဒုက္ခသည် များအား ကူညီစောက်ရှောက်ရေးအသင်း၊၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ အောက်တိုဘာလ (၂၇) ညနေ (၇)နာရီတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ တက်ဆက်ပြည်နယ်၊ အော်စတင်မြို့ တနေရာတွင် ကျင်းပသော ညနေစာမိတ်ဆုံစားပွဲအခမ်းအနား (မြက်ခင်းပြင်)သို့ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အော်စတင်မြို့ရှိ ကချင် တိုင်းရင်းသားများမှ သွားရောက်ကာ ၄င်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသော၊ MRC မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ နှင့် အမေရိကန်မှ အလှူရှင်များ၊ အခြားမြန်မာ့အရေး စိတ်ဝင်စားသူ များအား လက်ရှိမြန်မာ့ နိူင်ငံရေး အခြေအနေ၊ လက်ရှိ မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ်၏ တိုင်းရင်းသား ဒေသအတွင်းလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှူများ၊ ကချင်ဒေသစစ်ပွဲအကြောင်း နှင့်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ အကြောင်းတို့ အား မြေပုံနှင့် တကွ သွားရောက်တင်ပြ နိုင်ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထို့အပြင် ဧည့်သည်တော်များ၏ မေးမြန်းချက်များကို လည်း မြေပုံနှင့်တကွ မြန်လည် ရှင်းလင်း ဖြေကြားပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
at 10/30/2012 06:06:00 PM No comments: